Uber 4.274.10002 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.274.10002 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Uber
Uber မိနစ်-တစ်ရက်သို့မဟုတ်ညဉျ့အခြိနျ၌အစာရှောင်ခြင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစီးများအတွက် ridesharing App ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တက္ကစီသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုရှိပါတယ်။ Uber နှင့်အတူ, သင်ရုံတစ်စီးကိုတောင်းဆိုဖို့သာပုတ်ပါ, အဲဒါကို select လုပ်ပါမြို့ကြီးများအတွက်အကြွေးသို့မဟုတ်ငွေသားနှင့်အတူဆပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
သငျသညျလေဆိပ်သွားသို့မဟုတ်မြို့တွင်းအနှံ့ဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်, တိုင်းအခါသမယတစ်ခု Uber ရှိပါတယ်။ Uber App ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်-ဒေါင်းလုတ်လုပ်ယနေ့သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်ယူကျော်ကို 630+ မြို့ကြီးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ Uber တောင်းခံလွယ်ကူတဲ့ဒီမှာကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုင်:
- ရုံ app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်သွားရှိရာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
- သင့်ဒရိုင်ဘာရှိရာအရပ်၌သင်တို့ကိုတက်ကောက်ဖို့သိတယ်ဒါကြောင့်ဒီ app သင့်တည်နေရာကိုအသုံးပြုသည်။
- ငွေပေးချေမှုရမည့်အကြွေးဝယ်ကဒ်, select လုပ်ပါမြို့ကြီးများအတွက်ငွေသား, အန်းဒရွိုက် Pay ကို, PayPal ကနှင့်ပိုပြီးအားဖြင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
- စီးပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ဒရိုင်ဘာကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုကို Uber အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့တုံ့ပြန်ချက်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းအီးမေးလ်ဖြင့်တစ်ဦးလက်ခံရရှိလိမ့်မယ်။
လျင်မြန်စွာ B မှတစ်ဦးထံမှရရန်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းလိုအပ်ပါသလား? uberX ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးတတ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီ option ကိုယူပါ။
သင့်ရဲ့စီးနင်းအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့လိုပါသလား? သင့်ရဲ့လမ်းခေါင်းနှစ်လုံးနှင့်အနိမ့်ယာဉ်စီးခကိုခံစားသည်အခြားမြင်းစီးနှင့်အတူ uberPOOL-တို့အတွက် memory ခရီးသွားယူပါ။
သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံခြီးမွှောလိုပါသလား? UberBLACK အတူ High-end မော်တော်ယာဉ်ကိုယူပါ။ နှင့်ပိုပြီးရွေးချယ်စရာ-ရှိမရှိသင်တစ်ဦးကြီးတွေအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူခရီးသွား, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း features တွေပါတဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုအပ်နေပါသေးရဲ့။
Uber https://www.uber.com/cities မှာသင့်ရဲ့မြို့အတွက်ရရှိနိုင်လျှင်ကြည့်ရှုပါ
https://twitter.com/uber မှာ Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ
https://www.facebook.com/uber မှာ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသလား? uber.com/help သွားရောက်ကြည့်ရှု
Uber အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Uber အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
superuser4k စတိုး 46.6k 28M
APK ဗားရွင္း 4.274.10002
File Size: 65.54MB
Release date: 2019-07-31 03:56:26